I-White Feather Eagle Bay - I-Airbnb
I-White Feather Eagle Bay
Eagle Bay, Western Australia, i-Australia
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Amy
I-White Feather inomoya othatha ukubuka okumangalisayo kwamanzi azolile, acwebile e-Eagle Bay. Ehlezi emphemeni, ejabulela ukuthula nokuthula, efunda incwadi enengilazi yewayini. Indlu ingamamitha angu-300 kuphela ukusuka ogwini, enamathrekhi okuhamba amangalisayo, ezinye zezindawo ezingcono kakhulu zokusefa eduze... kanye ne-Eagle Bay Brewery, Wise Winery kanye ne-Lot 80. I-White Feather iyimizuzu eyi-10 kuphela ukuya e-Dunsborough Town lapho wakhona. uzothola izitolo nezindawo zokudlela ezinhle. Indlu enhle kanye nendawo yemindeni.
Isitezi esingezansi siyatholakala ukuze uqashe i-Down South yakho elandelayo! Ikhishi labapheki liqokwe ngokuphelele ngezinto zegesi indawo yokupheka yegesi enendawo yebhentshi evulekile, indawo yokudlela yasekuseni yasekhishini enezihlalo ezi-3 zamabha kanye nomshini wekhofi weNespresso. Indawo yokudlela, ihlalisa kahle abantu abadala abangu-8 kanye nesilungiselelo esinethezekile sangaphandle ukuze ujabulele ikhofi lakho lasekuseni endaweni ebheke olwandle lwase-Eagle Bay. Kukhona i-BBQ etholakalayo etholakala ngaphandle emphemeni. I-WiFi yamahhala iyatholakala endlini.
Ikamelo Lounge linethezekile ngosofa aba-3, i-Digital TV ne-Foxtel ne-DVD.
Igumbi lokulala elikhulu linombhede weNkosi kanye ne-en-suite yalo, ikamelo lesibili lineNdlovukazi, igumbi lesithathu linenkosi nombhede owodwa owodwa kanti igumbi lesi-4 linezingoma ezi-2 x zenkosi.
*Singakwazi ukuhlinzeka nge-portacot nesihlalo esiphezulu uma kudingeka.
I-Outside shed iyigumbi lemidlalo elinetafula le-pool, i-fooseball, i-table tennis kanye ne-dart board. Kukhona ne-kayak lapho, eyalabo abafuna ukugwedla ogwini.
Uma ubhukha ku-White Feather kuhlanganisa ukufinyelela mahhala ku-Dunsborough GYM evulwa ngo-24/7. Ungafinyelela izisindo zamahhala nawo wonke amakilasi. Itholakala endaweni yezimboni ekhanyayo eDunsborough eduze nje komgwaqo uCommage. Kunolwazi olwengeziwe kubhukwana lendlu noma bheka iwebhusayithi yaseDunsborough Gym.
I-Eagle Bay icashe ngokucophelela esifundeni esiseningizimu-ntshonalanga yeNtshonalanga ye-Australia. Imi ekugcineni kwe-Cape Naturaliste e-Geographe Bay, indawo ye-Eagle Bay isho ukuthi iyindawo ekahle yokuhlola isifunda soMfula i-Margaret River.
Iphinde ithokozele ukusondela emadolobheni aseduze, okuhlanganisa i-Dunsborough, Yallingup ne-Busselton, enezela esikhangisweni sayo njengendawo efanelekile yokuphunyuka ngempelasonto noma iholide elinwetshiwe.
I-Eagle Bay iyikhaya kwamanye amabhishi aseningizimu-ntshonalanga abukeka kahle kakhulu futhi ahlanzekile, lawa manzi ahlinzeka ngamathuba amahle kakhulu okudoba, ukubhukuda noma ukudonsa i-snorkelling. Abatshuzi lapha bazophinde bathandane nengxube emnandi yamagagasi asendle nahlanganisiwe, futhi kukhona ongabanjwa.
I-Dunsborough iwuhambo lwemizuzu eyi-10 kuphela ukusuka e-Eagle Bay futhi iyikhaya lezitolo eziningi, amathilomu, izindawo zokudlela, imibukiso nezitolo zezobuciko nemisebenzi yezandla, okuyenza ibe ngenye yezindawo ezaziwa kakhulu ngamaholide omndeni eNtshonalanga Australia.
Sizotholakala ukuze sihlangane nawe mathupha uma sidinga noma siphendule noma imiphi imibuzo phakathi namahora ebhizinisi nge-imeyili noma ngocingo. Uma kukhona udaba oluphuthumayo ngicela ungishayele ucingo ngqo, inombolo yami isefrijini.